8-da barnaamij ee kamaradaha ugu fiican ee Windows, macOS iyo Linux 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Waxaad ka heli kartaa qaybo ka mid ah barnaamijyada webcam ee suuqa. Codsiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa in lagu tijaabiyo kaamerada PC-ga oo la arko haddii ay gaarsiiso waxa ay ballanqaadayso. Qaar kale waxay leeyihiin soo jeedin ka xiiso badan oo ay ku jiraan miirayaasha sawirka la qabtay. Waxa kale oo jira ikhtiyaarro kuu oggolaanaya inaad duubto wax kasta oo la soo bandhigo si dib loogu eego.
Hoos waxaa ku qoran 8 barnaamijyada kamaradaha ugu fiican ee Windows, macOS, iyo Linux. Baadhid!
ManyCam waxay bixisaa howlo fara badan oo waxtar u leh shirarka fiidiyaha ama duubista casharka fiidiyaha. Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad wax ku qorto oo aad wax ku sawirto shaashadda, ku dar sawirro fiidiyowga, ku dar qaabab, iyo kuwo kale. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu dhajiyo sawirka webcam faylalka, muujinta shaashadda kombiyuutarka, ama xitaa kamaradda taleefanka gacanta.
Isticmaaluhu wali wuu sameyn karaa hagaajinta midabka, dhajiye, beddeli kara madadaalo, iyo sidoo kale inuu adeegsado miirayaal madadaalo iyo saameyn leh. Waxa kale oo jira ikhtiyaar ah in si toos ah looga sii daayo barnaamijyo kala duwan, sida YouTube, Twitch, iyo Facebook. Ama, haddii aad doorbideyso, keydso nuxurka illaa 720p ee nooca bilaashka ah iyo 4K nooca la bixiyay.
Fiidiyowga waxaa lagu keydin karaa qaabab caan ah sida MP4, MKV, MOV, iyo FLV.
ManyCam (bilaash, oo leh ikhtiyaarro loogu talagalay qorshooyinka lacag bixinta oo leh astaamo badan oo aan lahayn calaamado-biyood): Windows 10, 8 iyo 7 | macOS 10.11 ama ka sareeya
YouCam waa barnaamij siiya qalab loogu talagalay shaqada iyo ciyaarta. La jaan qaada adeegyada wicitaanka fiidiyowga ee kala duwan iyo barnaamijyada fiidiyowga tooska ah, waxay leedahay miirayaal qurxin waqtiga-dhabta ah. Ma aha in la xuso boqolaalka saameynta dhabta ah ee la kordhiyay.
Sida soo-jeedinta, isticmaaluhu wuxuu leeyahay agab uu ku qoro, ku dul-dhigo fiidiyowga sawirrada, la wadaago shaashadda, iyo kuwo kale. Isku xirnaanta saaxiibtinimadeed waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho sifooyinka ugu muhiimsan si fudud.
Haddii aad doorato inaad wax duubto, fiidiyowga waxaa lagu keydin karaa go'aamo kala duwan, oo ay ku jiraan Full HD, qaababka AVI, WMV, iyo MP4.
Xamari (lacag bixin, 30 maalmood tijaabo bilaash ah): Windows 10, 8, iyo 7
3. Imtixaanka webcam
Imtixaanka Webcam waa codsi toos ah oo kuu oggolaanaya inaad ku tijaabiso howlaha ay bixiso kamaraddaada PC-ga si fudud. Si fudud u qor websaydhka oo marin u hel badhanka Halkan guji si aad ugu oggolaato helitaanka aqoonsiga kaamerada webka. Kadib u tag Isku day kamaradayda. Qiimeyntu waxay qaadan kartaa daqiiqado yar.
Waa suurtagal in la ogaado xogta sida xallinta, heerka waxoogaa, tirada midabada, dhalaalka, dhalaalka, iyo kuwo kale. Imtixaanka guud ka sokow, isticmaaluhu wuu qiimeyn karaa dhinacyo gaar ah sida xallinta, heerka jir iyo makarafoonka. Waxa kale oo jira ikhtiyaar ah in lagu duubo fiidiyow bogga laftiisa oo loo kaydiyo sida WebM ama MKV.
Imtixaanka webcam (bilaash): Web
4. Kaamirada Windows
Windows-ka laftiisu wuxuu bixiyaa barnaamij asalka u ah barnaamijka webcam. Kameradda Windows waa baddel fudud laakiin shaqeynaya, gaar ahaan kuwa kaliya u baahan howlaha aasaasiga ah. Adoo ka shaqeynaya habka Xirfadleyda ee goobaha, waxaad hagaajin kartaa dheelitirka cad iyo dhalaalka.
Si aad had iyo jeer ugu ekaato jir, dalabku wuxuu leeyahay noocyo shabag ah. Waxa kale oo jira ikhtiyaar ah in la beddelo tayada fiidiyowga ee u dhexeeya 360p iyo Full HD iyo soo noqnoqoshada, laakiin had iyo jeer waa 30 FPS. Natiijooyinka waxaa lagu keydiyaa JPEG iyo MP4.
Kaamirada Windows (bilaash): Windows 10
Webcam Toy waa codsi fudud oo khadka tooska ah ah oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya miirayaal madadaalo leh si uu sawirro ula galo kamaradda webka. Kaliya tag bogga oo guji Diyaar? Dhoolacadee!. Haddii biraawsarku xannibiyo marinka, sii oggolaansho inaad ku isticmaasho kamaradda PC-ga.
Kadib guji badhanka Normal in la raro dhammaan saamaynta la heli karo. Waxaa jira daraasiin ikhtiyaarro ah, oo ay ku jiraan kaleidoscope, qaabka cirfiidka, qiiqa, filim hore, kartoon, iyo waxyaabo kale oo badan. Xulo waxaad jeceshahay ka dibna u gudub astaanta kamarad si aad uqorto.
Natiijada waa lagu keydin karaa kombuyuutarka ama si fudud ayaa loogula wadaagi karaa Twitter, Sawirrada Google ama Tumblr.
Toy Webcam (bilaash): Web
In badan oo ka badan barnaamijka webcam, OBS Studio waxaa loo yaqaanaa la jaanqaadkiisa dhammaan adeegyada waaweyn ee fiidiyoowga fiidiyoowga ah. Waxaa ka mid ah, Twitch, Facebook Gaming iyo YouTube.
Laakiin dabcan sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad duubto sawirkaaga kamaradaha oo aad ku keydiso waxyaabaha ku jira MKV, MP4, TS iyo FLV. Qaraarku wuxuu u dhexeeyaa 240p ilaa 1080p.
Codsigu sidoo kale wuxuu leeyahay dhowr qalab tafatir ah oo awood u leh inay maadadaadu u ekaato mid xirfad leh. Waxaa ka mid ah astaamaha loogu talagalay hagaajinta midabka, asalka cagaaran, isku dhafka kanaalka maqalka, yaraynta buuqa, iyo waxyaabo kaloo badan.
Daraasada OBS (bilaash): Windows 10 iyo 8 | macOS 10.13 ama ka sareeya | Linux
GoPlay waxay u noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan bilowga, laakiin waxay rabaan inay ka fogaadaan aasaaska. Barnaamijku wuxuu bixiyaa shaqooyin ku saabsan qorista shaashadda, iyo sidoo kale gelinta sawirrada. Fiidiyowyada waxaa lagu duubi karaa illaa 4K at 60fps oo lagu tifaftiro tifaftire la dhisay.
Codsiga wuxuu kaloo kuu ogolaanayaa inaad duubto shaashadda PC-gaaga oo aad sameyso fiidiyowyo toos ah. Nooca bilaashka ah ee arjiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad duubto fiidiyowyada kaliya 2 daqiiqo, oo leh astaamaha biyaha. Natiijada waxaa lagu keydin karaa MOV, AVI, MP4, FLV, GIF ama cod ahaan.
Tag ciyaarta (bilaash, oo leh nooca buuxa ee la bixiyo): Windows 10, 8 iyo 7
8. Duubista Shaashadda Khadka Tooska ah ee Apowersoft
Diiwaangelinta Shaashadda Bilaashka ah ee Apowersoft waxay ku habboon tahay kuwa u baahan inay duubaan shaashadda PC-ga iyagoo daawanaya sawirka webcam. Boggu wuxuu bixiyaa ilo loogu talagalay qorista gacanta ee shaashadda oo ay ku jiraan qaabab. Wax walba waa onlayn, laakiin kahor intaadan bilaabin, waxaad ubaahantahay inaad soo dejiso a gantaal gantaal wax yar PC
Natiijada waxaa lagu keydin karaa kombiyuutarkaaga sida fiidiyoow ama GIF, lagu keydin karaa daruuraha, ama si fudud ayaa loogu wadaagi karaa YouTube iyo Vimeo. Xalka waxaa loo dejin karaa mid hooseeya, dhexdhexaad ah ama sareeya.
Taariikhqorihii Screen Apowersoft Free Online (bilaash): Web
U isticmaal taleefankaaga kambiyuutar websaydh PC ah adoo adeegsanaya Wi-Fi ama fiilada USB
Codsiyada lagu duubo shaashadda PC-gaaga bilaash
Barnaamijyo basaasnimo waxtar leh